Semalt विशेषज्ञता: Google एनालिटिक्स रिपोर्टहरूबाट रेफरल स्पाम हटाउँदै
कहिलेकाँही Google एनालिटिक्सले कुनै विशेष पदोन्नतिहरू वा उत्कृष्ट सामग्रीको बिना साइटमा रेफरल ट्राफिकको एक अनौंठो प्रवाहको चित्रण गर्दछ। यो कसरी भयो र किन भयो भनेर वर्णन गर्न गाह्रो हुन्छ। सहि जानकारी प्राप्त गर्नका लागि, कसैले स्थायी रूपमा रेफरल स्प्यामबाट छुटकारा पाउनु पर्छ।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक लिसा मिशेलले इन्फ्लक्स र अनावश्यक स्प्यामको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर वर्णन गर्दछ।
रेफरल स्पाम तब हुन्छ जब वेबसाइटले स्पाम बट्स वा प्रोग्रामहरूबाट रेफरल ट्राफिक प्राप्त गर्दछ। जानकारी Google एनालिटिक्स खाता रिपोर्टमा देखा पर्दछ जुन डेटाको साथ गडबडी हुन्छ र रिपोर्टिंगको साथ समस्याहरू प्रजनन गर्दछ। तिनीहरू स्प्याट गर्न सजिलो हुन्छ र विश्वभरका स्रोतहरू हुन सक्छन्। अन्य समय, यो अधिक गुप्त हुन्छ, तर १००% बाउन्स दरहरूको साथ रेफरल ट्राफिक सम्भवतः एक रेफरल स्पाम हो।
यदि एक अझै निश्चित छैन भने, हातमा राम्रो मालवेयर प्रोग्रामको साथ, तिनीहरूले साइटमा व्यक्तिगत तवरले हेर्न सक्छन् कि ट्राफिकमा कुनै प्रभाव छ कि छैन। रेफरल स्प्यामको साथ प्रयोग गरिएको प्राविधिक भनेको त्यो हो कि आवर्ती वेबसाइट लक्ष्य वेबसाइटमा र्याक रेफरल यूआरएलहरू अनुरोध गर्दछ। भूत स्प्याम त्यो हो जुन प्राप्त गर्दछ स्प्यामरको आवश्यकता पर्दैन साइटमा उनीहरू लक्षित गर्न को लागी।
सन्दर्भ स्प्याम फिक्स गर्दै
केही व्यक्तिहरू दावी गर्छन् कि कसैले रेफरल स्प्यामलाई बहिष्कार गर्न सक्छ। जानकारी पूर्ण रूपमा सहि छैन, र यो महत्त्वपूर्ण छ कि कसैले गुगल एनालिटिक्समा रेफरल बहिष्करणहरूको सूची प्रयोग गर्नबाट टाढा रहनु पर्छ। कारण यो छ कि यो तेस्रो-पक्ष शपिंग कार्टबाट ट्राफिक बहिष्कार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसले ग्राहकहरूलाई ट्राफिकको रूपमा गणना गर्नबाट रोक्छ यदि तिनीहरू साइटबाट बाहिर निस्कन फर्के। गुगल एनालिटिक्सले फर्केका आगन्तुकहरूलाई पूर्व स्रोत, वा मध्यममा जडान गर्न कोशिस गर्दछ, यसैले यसलाई रेफरल ट्राफिकको अंशको रूपमा बाहेक। त्यसो भए, यी रेफरलहरू बाहेक, खराब रेफरल ट्राफिक एक फरक माध्यम / स्रोतमा पुनःनिर्देशित हुनेछ, र यसरी अझै विश्लेषकमा झर्नेछ।
स्पाम मार्ग हटाउँदै
बहिष्करण सूची रेफरल स्प्यामको मुद्दालाई ठीक गर्ने उत्तम तरिका होईन। विधि फिल्टर, तर स्प्याम ट्राफिक समावेश छैन। त्यसकारण, प्रत्येक दृश्यबाट ट्राफिक रेफरल बहिष्करण विकल्प प्रयोग गरेर फिल्टर गर्नुपर्नेछ। निम्न विधिहरूले यसलाई प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ:
१. दृश्य स्तरमा "रेफरर स्पाम" नामको नयाँ फिल्टर फारम सिर्जना गर्नुहोस्
२. अनुकूलन विकल्पमा सेट गर्नुहोस्।
Field. क्षेत्र विकल्पमा, "अभियान स्रोत" सेट गर्नुहोस्
The. ढाँचा फिल्ड फिल्टरले निम्न अनुसार रेफरल स्पाम डोमेन समावेश गर्नुपर्दछ
Save. बचत गर्नुहोस्
विधि यी दृश्यहरूबाट विशिष्ट यातायात मेटाउँछ। यो महत्वपूर्ण छ कि प्रयोगकर्ताहरूले भविष्यमा प्रयोगको लागि पाठ फाइलमा यसको प्रतिलिपि राख्दछन्। केहि उत्तम अभ्यासहरूमा वेब विकासकर्ताको नियमित अभिव्यक्ति जाँच गर्नु समावेश गर्दै, ज्ञात बोटहरू र माकुरो फिल्टर गर्नका लागि विकल्प जाँच गरेको सुनिश्चित गरेर। फिल्टर लागू हुनको लागि २ implementation घण्टा लाग्छ।
अनुकूलन खण्ड सिर्जना गर्नुहोस्
अनुकूलन खण्डहरूले स्प्याम डाटालाई गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टहरू बन्द राख्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू थोरै अप्रत्याशित छन् जसको कारणले प्रयोगकर्ताहरूले निम्न पालना गर्नु पर्छ:
१. GA मा रिपोर्टिंग दृश्य खोल्नुहोस् र सेगमेन्ट थप्नुहोस्, नयाँ सेगमेंट (कुनै स्पाम छैन) चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि उन्नत सर्तहरू
२. फिल्टर गर्न प्रयोग गरिएको विकल्पहरूमा "सत्रहरू" र "बहिष्करण" स .्केत गर्नुहोस्
". "मिलान रेजेक्स" र "स्रोत" चयन गर्नुहोस्
Saved. पहिले सुरक्षित गरिएको नियमित अभिव्यक्ति टाँस्नुहोस्
यस पछि, त्यसपछि बचत गर्नुहोस् र त्यसपछि लागू गर्नुहोस्। यसले सफ्ट डाटा छोडेर रिपोर्टबाट सबै भूत स्प्याम हटाउँछ।
सबै भूत डाटा GA रिपोर्टहरूमा देखा नपर्दछ भनेर निश्चित गर्न रेफरल ट्राफिक नियमित रूपमा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्दछ। यहाँ सम्भावित परिदृश्य यो छ कि जब एक एकल स्पाम वेबसाइट हटाउँछ, सयौं, यदि हजारौं होइन, क्रप। यसको मतलब यो हो कि प्रयोग गरिएको आधारभूत सफाईले लामो समयसम्म समात्दैन। जहाँसम्म, एक प्राविधिक, वा गैर-तकनीकी दृष्टिकोणमा लिन्छ, यो Google एनालिटिक्स डाटाबाट रेफरल स्पामबाट छुटकारा पाउन सम्भव छ।
रेफरल स्प्यामले स्कwed्क एनालिटिक्स प्रस्तुत गर्दछ जसले गलत रिपोर्टहरूमा परिणाम दिन्छ। रिपोर्टहरूलाई डाटा र ट्राफिक दरहरूको सही प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। वेबसाइटमा के काम गर्दछ र के गर्दैन भनेर देखाउनको लागि स्केउड डेटामा भर पर्न सक्दैन।